प्रधानमन्त्री देउवाकै हलियाले पाएनन् परिचयपत्र
२१ भदौ अर्थात् सोमबार हलिया मुक्ति घोषणा भएको १३ वर्ष पूरा भएको दिन। हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच ५ बुँदे सहमतिसहित २१ भदौ २०६५ अर्थात् आजकै दिन हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो।
डडेल्धुरासहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइएको छ। सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको सोमबार १३ वर्ष पूरा भएको छ। तर, हलियाका दुःख भने ज्युँकात्युँ छन्। यतिसम्मकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै हलियालेसमेत परिचयपत्र नपाएको गुनासो गरेका छन्।
बुवा बाजेको पालादेखि देउवा परिवारको हलियाको रुपमा काम गरेको भएपनि आफूलाई परिचयपत्रसमेत नदिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ अशिग्रामका भीमबहादुर सार्कीले गुनासो गरे । उनले देउवा परिवारको जमिन बनाएकै कारण देउवाको घरमा गएर काम गरेकोसमेत स्मरण गरे।
के भन्छन् हलियाका अगुवा ?
अहिले पनि डडेल्धुराका अधिकांश हलियाहरू परिचयपत्र लिनबाटसमेत वञ्चित भएको राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरू बताउँछन्। छुटेका हलियाहरूको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूले पाउने सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
१. पुस्तौँदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिक रूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने।
२. हलियाका ११ बुँदे मागको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने।
३. हलियाका ११ बुँदे मागप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहँदै कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने।
४.आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।
५.राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने।
डडेल्धुरामा १३ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार, दुई युवक पक्राउ